Kontaroolayaasha Dhammaan, u isticmaal qalabka fog ee qalabkaaga 'iOS' Wararka IPhone
Kontarooleyaasha Dhammaan, u isticmaal qalabka korontada ku shaqeeya qalabka 'iOS'
Juan Colilla | | Qalabka IPhone, Cydia, Jailbreak
Apple waxay soo bandhigtay macruufka 8 suurtagalnimada isticmaal kontaroolada si aad u ciyaarto ciyaaraha aaladahayaga, API ah oo ay si wanaagsan u heleen milkiilayaasha qalab iOS ah adoo noo ogolaanaya inaan ka saarno kantaroolka taabashada shaashadda oo aan ciyaarno iyadoo aan farahayagu dhibsanayn.
IPhone-ka iyo iPad-kii ugu dambeeyay runtii waxay leeyihiin karti badan oo farshaxan ah, taas oo u oggolaaneysa tayada cayaaraha fiidiyowga ee aan ka helno AppStore inay noqdaan kuwo aad u cajaa'ib leh aalad leh astaamahan.
Waxaas oo dhan waxaa u dheer, haddii aan ku darno sawirada iyo waxqabadka lagu gaari karo Birta API ee macruufka 8 loogu talagalay aaladaha leh 64-bit naqshadaha, ka dib waxaan horeyba uga soo hadalnay ereyo ka waaweyn.
Si aad ugu raaxaysato waxaas oo dhan, waxaad u baahan tahay oo keliya gamepad leh Bluetooth, kaas oo si xarig-la’aan ah ugu xirma taleefannadeena una soo gudbiya amarradeenna waqtiga dhabta ah cayaaraha lagu waafajiyay API-kan, laakiin had iyo jeer maahan wax sidaas u fudud, MFi shahaado la siiyaa ayaa u muuqda ku dhowaad qiimayaasha aadka u sarreeya ee u dhexeeya € 30 iyo € 90, waa wax aan u arko (naftayda iyo dad badan) aad u sarreeya buro fudud iyo in sidoo kale u muuqdaan in ay leeyihiin muuqaal naxdin leh iyo qaabab qalaad.
Si kastaba ha noqotee, dad badani waxay leeyihiin ilaaliyeyaal buluug ah oo guriga jooga, oo si fantastik ah loogu talagalay xakamaynta saxda ah, oo leh qaybo tayo leh iyo qaab caan ah; Waxaan ka hadlayaa Sony DualShock 3 iyo 4, xakamaynta Playstation 3 iyo 4 siday u kala horreeyaan.
Dhibaatadu waxay tahay in kontarooladaas la waafajiyay iyada oo lagu xirayo micro-USB mana u diyaarsan yihiin inay adeecaan cid aan ka ahayn qunsulka. Laakiin nasiib wanaag waxaa jira beel ballaadhan oo horumariyayaal ah oo diyaar u ah inay wax walba qabtaan oo ay la yimaadaan fikrado waaweyn, xaaladdan, mid ka mid ah ayaa ah Kontarooleyaasha Dhammaan.
Si aad ula jaanqaado qalabka fog ee macruufka ah, waa inaad kala soo baxdaa barnaamijka u dhigma nidaamkaaga hawlgalka, ha noqdo Windows, OS X ama Linux.
Marka barnaamijka OS-kaaga la soo dejiyo oo la rakibo, waa inaad ku xirtaa DualShock kombuyuutarka ama MAC oo aad gashaa cinwaanka Bluetooth-ka ee iPhone / iPod / iPad ee barnaamijka aad ka heli karto "Settings> General> Information", mar haddii tan la dhammeeyo kooxda martida loo yahay waxay noqon doontaa qalab iOS ah.
Maamulaha Dhammaan Waa jaangooyooyin aan ka heli doonno Cydia oo la jaan qaadaya macruufka 7 iyo macruufka 8 qiimaha € 1, xaqiiqdii aad ayey uga raqiisan tahay barnaamijka 'MFi Gamepad' waana hubaal in DualShock nooga sarreeyo kuwan tayada ah (gaar ahaan Dualshock 79 oo ay ku jiraan illaa guddi taabasho).
Dhanka kale, wax walba maahan war wanaagsan, in kasta oo API-ga ay tahay fikrad aad u fiican, haddana dhammaan cayaaraha looma habeynin, xitaa casriga casriga ah ee 5-ta ah ma ahan, waa wax ka tagaya waxyaabo badan oo laga doonayo ciyaar heerkaas ah.
Nasiib wanaag waxaa jira barnaamij leh liis garayn dhammaan ciyaaraha la jaan qaada ilaaliyayaasha MFi, tani waxay fududeyn doontaa hawsha markaad raadineyso cinwaanno la ciyaari karo.
Dabcan habkani wuxuu leeyahay dhib yarMaxaan ku sameeynaa iPhone inta aan ciyaareyno? Marka laga hadlayo dareenkaas waa inaadan ka walwalin, shirkado dhowr ah ayaa og in kontarooladaan loo isticmaalay inay ku ciyaaraan waxayna ku dhejiyeen adapters qiimo aad u hooseeya (ilaa € 10).
para Dhagxaan 3 Waxaan haynaa xulashooyinkaan 2 oo dabooli doona dhammaan noocyada casriga ah:
1. Adaabiyaha koobabka wax lagu nuugo € 10 (oo ku habboon taleefannada leh muraayad dhabarkiisa ah ama qalab siman oo aan daaq lahayn):
2. Adabtarada dherer la hagaajin karo € 8 (oo ku habboon taleefan kasta)
para Dhagxaan 4 waa inaan bixinaa wax yar, maxaa yeelay waa goor dhow iyo Snoy waa sumadda kaliya ee iyaga iibisa.
Waxaad dooran kartaa ikhtiyaarka koob nuugid rasmiga ah si loo isticmaalo XPeria Z iyo Playstation Remote, oo u dhiganta ku dhowaad € 30:
Aynu rajaynno in tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah ay u isticmaali doonaan API-ga oo aan sida ugu badan uga faa'iideysan karno qalabkan. Waxaan isku dayi doonaa inaan xoogaa helno iyaga ka mid ah si ay kuu tusaan sida ay u shaqeyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Kontarooleyaasha Dhammaan, u isticmaal qalabka korontada ku shaqeeya qalabka 'iOS'
Ciise Gonzalez dijo
amazon waxaa jira mid aad ugu eg Xbox midka ku saabsan € 25 ama wax la mid ah.
Ku jawaab Jesús González
Jawaab Brayar Alvites Atencio
Facundo Casal Despres dijo
Naa taasi waa fiican tahay
Jawaab Facundo Casal Després
Waxaan ku ciyaaraa snes, ps1, nintendo 64 iyo nintente ds game on iphone-keyga aniga oo leh kantaroolaha ps3 ama shaashadda lafteeda. Waxaan hayaa 5s leh macruufka 8.1.2
Ku jawaab Chinocrix
Ku shaqeeya macruufka 9.2
daaqadu way ka dhacday hadii qof haysto fadlan
Xirmooyinka curcurka Fitbit waxay sababaan cuncun maqaarka markale
Aqoonsiga laba-tallaabo ah ee loo yaqaan 'FaceTime' iyo 'iMessage'